Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): Burmese Military's motor shelling and air-striking. And, thousands of civilians have crossed the border to China to escape
Burmese Military's motor shelling and air-striking. And, thousands of civilians have crossed the border to China to escape
at 12/05/2016 12:27:00 AM
မြန်မာ့တပ်မတော်၏ သာလွန်အင်အားဖြင့် ရွာထဲသို့ လက်နက်ကြီးများပစ်ခတ်ခြင်း၊ လေယာဉ်ဗုံးများကျဲချခြင်းတို့ကြောင်း ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း မုံးကိုဒေသရှိအပြစ်မဲ့ပြည်သူများ သေဆုံး၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိနေမှု မြှင့်မားနေကြောင်း စိတ်မကောင်းစွာဖြင့် ကြားသိနေရပါသည်။
Many innocent civilians from Munggu area, Northern Shan State, are death and injuries by the Burmese Military's motor shelling and air-striking. And, thousands of civilians have crossed the border to China to escape the violence between the Burmese Military and Ethnic Armed groups, according to local people and news.